Tọghata DVD vidiyo ochie gị na faịlụ na DVD Ripper Pro | Esi m mac
Fewbọchị ole na ole gara aga, egosiri m gị ngwa nke na-enye anyị ohere ịgbanwe faịlụ vidiyo ọ bụla n'ime usoro DVD. Ọtụtụ n'ime unu, dịka m dere, kwuru na itinye ụdị ụdị a enweghị isi na afọ anyị bi ebe draịvụ ngwa anya abụrụla akụkụ dị mkpa nke kọmputa, ma ha bụ Mac ma ọ bụ PC. Taa anyị na-ekwu maka ngwa dị ka nke ahụ, mana ihe bara uru karị ma ọ bụrụ na ị ka nwere Mac nwere draịva DVD n'aka, ebe ọ na-enye anyị ohere ịgbanwe DVD n'ime faịlụ vidiyo. O doro anya ngwa a na-iji na n'ụlọ videos ọ bụghị dọwara DVD nkiri dị ka ọ mere afọ ole na ole gara aga na-agafe ihe nchebe.
N'ihi DVD Ripper Pro, anyị nwere ike ịgbanwe faịlụ vidiyo DVD na usoro ndị a: MP4, MOV, FLV, AVI, WMV, M4V, MPEG, M2TS, MKV, TS, ASF, 3GP, VOB, AMV, DivX, Xvid, ProRes , MP3, FLAC, WAV, WMA, AAC, ALAC, AC3, AIFF, MP2, M4A, OGG tumadi. Mana o na - enye anyi ohere wepu odi na DVD ka MP3, WMA, OGG ... ka ịkpọ aha nke kachasi mkpa. Ngwa a na-akwado cna vidiyo na 1080p na 4k mma, na-ekwe ka anyị tọghata iji nọgide na-enwe video àgwà mgbe niile na a video faịlụ.
Ọ bụrụ na vidiyo ndị anyị chọrọ ịtụgharị nwere oge na mgbe anyị nyefere ha na DVD ha ezughi oke zuru oke, tupu ịtụgharị, anyị nwere ike gbanwee mkpebi vidiyo, nchapụta, saturation yana mkpọtụ vidiyo / ọka ma mezie akụkụ ụfọdụ nke vidiyo ahụ. DVD Ripper Pro nwere ọnụahịa mbụ nke 24,99 euro, maka awa ole na ole ọ nwere ike ịdị maka nbudata n'efu maka obere oge. Ngwa a chọrọ macOS 10.7 ma ọ bụ mgbe e mesịrị, ma biri ihe karịrị 45 MB na Mac anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Tọghata gị ochie video DVD ka faịlụ na DVD Ripper Pro
George P.S. dijo
Na-emere ndị mmadụ otu ihe ahụ, kedu ụzọ iji maa njakịrị, ọ bụghị oge mbụ ị na-ekwu na ihe bụ ihe efu na ọ bụ ụgha, agaghị m eso gị ọzọ!
Zaghachi Jorge PS
Ndo, mana aha ahụ anaghị egosi n’oge ọ bụla na ngwa ahụ bụ n'efu. N'oge a na-ede edemede ahụ, ngwa dị maka n'efu maka nbudata na egosiri m nke a n'isiokwu ahụ, ọ bụrụ na ịnwere ohere ibudata ya. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ bụghị nsogbu m ma ọ bụ nke blog.
Rene Loli dijo
Imebi oge na dollar 18. Ngwa a adọkpụghị DVD echedoro.
Zaghachi ka Rene Loli
Hotelsfọdụ ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ na-emejuputa Apple TV maka ndị ahịa ha